Windows Movie Maker ကျူတိုရီရယ် - Desktop ကိုဗီဒီယို
Software ကို & Apps ကပ ဗီဒီယိုကို & အသံ
Windows Movie Maker နှင့်အတူ Edit ကိုဗီဒီယိုမှလေ့လာပါ
Movie Maker ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းကျူတိုရီရယ်
UPDATE: Windows Movie Maker ယခုရပ်စဲအခမဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ archive ကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုကျန်ရစ်ပါတယ်။ ထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှကြိုးစားပါ နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် - - t ကို hree ကြီးမြတ်အခြားနည်းလမ်း အစား။
ဒီရက်ဖန်စီပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ပြုလုပ်ခြင်း။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာအပေါ်ကို Windows ရှိပါက, သင်ပြီးသားသင်လိုအပ်သမျှကိုရရှိပါသည်။
Windows ကိုပြေးမဆိုကွန်ပျူတာဖြစ်ကောင်းပြီးသားအခြေခံတည်းဖြတ်ရေးဆော့ဗ်ဝဲကို Windows Movie Maker ရှိပါတယ်မဟုတ်, လျှင်, သင်အခမဲ့ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အောက်ကလဲ tutorial Windows Movie Maker ကိုအသုံးပြုရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်, သင်စတင်ရန်ကူညီပေးပါမည် ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ် သင့်ရဲ့ PC မှာ။
Windows Movie Maker တစ်ဦးက New Project မှ Start
အယ်လ်ဘာတို Guglielmi / ကျောက်ခေတ် / Getty Images
ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ Movie Maker ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုကို set up ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီသင်ခန်းစာသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုစတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။
Windows Movie Maker မှသွင်းကုန်ဗီဒီယို
Next ကို, သင်ဖြစ်ကောင်းသင်၏စီမံကိန်းအချို့ဗီဒီယိုကို add ချင်ပါလိမ့်မယ်။
Movie Maker ထဲမှာ Edit ကို Video Clips
ဒါဟာသင့်ရဲ့စီမံကိန်းကိုသို့အားလုံးသင့်ရဲ့ရိုက်ကူးအရေးပေါ်သိမ်းထားနှင့်မှာစွန့်ခွာရန်လွယ်ကူပေမယ်အနည်းငယ်တည်းဖြတ်သင်၏ video သန့်ရှင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုစေခြင်းမှရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ပေါ်မှာငါတို့သင်ခန်းစာထုတ်စစ်ဆေး Windows Movie Maker ထဲမှာကလစ်များတည်းဖြတ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ ။
တစ်ဦး Movie Maker Automovie Create
သငျသညျပျင်းရိခံစားနေလျှင်သင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပြည့်စုံ Movie Maker ကိုသင်အဘို့သင့် edited ရုပ်ရှင်ဖန်တီးစေဖို့အတွက် Windows Movie Maker Automovie tool ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Movie Maker Automovie သင်ခန်းစာ ဘယ်လို Automovie tool ကိုသုံးစွဲဖို့သငျသညျသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သွင်းကုန်ဓါတ်ပုံများနှင့် Movie Maker မှဂီတ
တစ်ဦး Movie Maker Photomontage Create
သငျသညျ Movie Maker သို့ဓာတ်ပုံများတင်သွင်းင့်ပြီးတာနဲ့သင်ကဗီဒီယိုသူတို့နှင့်အတူတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်စေနိုင်သည် ပျော်စရာ photomontage ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူလေ့လာ photomontage သင်ခန်းစာ ။
သင့်ရဲ့ Movie Maker Project ထဲတွင်ဂီတကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့ Give Windows Movie Maker စီမံကိန်းကိုတစ်ဦးတေးသံဂီတဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်သည်။ အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာထုတ်စစ်ဆေး Windows Movie Maker အတွက်ဂီတနဲ့အလုပ်လုပ် ။
Windows Movie Maker ထဲမှာကူးအပြောင်းကာလ Add
Windows Movie Maker အတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအကြားအကူးအပြောင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ သငျသညျကိုလညျးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတူနှင့်သင့်ဗီဒီယိုများ၌သူတို့ကိုအသုံးပြုအတွေးအခေါ်များအရအဘယျသို့ထွက်စစျဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Movie Maker ေူပာင်းလဲရေးပြခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Movie Maker အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု Add
သင့်ရဲ့ရန်သက်ရောက်မှု Add ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ သူတို့ရဲ့အရောင်နဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲစေရန်။
Movie Maker အတွက်ခေါင်းစဉ် Add
သင်၏ရုပ်ရှင်နာမည်တစ်ခု Give နှင့်သင့်ပေး သွန်းနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအကြွေး ။
သင့်ရဲ့ Movie Maker ဗီဒီယိုက်ဘ်ပေါ်တွင်တင်
ဝဘ်အဘို့သင့် Movie Maker ကိုဗီဒီယိုတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
Audacity သင်ခန်းစာ: ဘယ်လိုခြေဆွံ့သောသူကိုအသုံးပြုခြင်းက MP3 ဖို့နဲ့ WAV ပြောင်းမှ
သင့်ရဲ့ MP3s Organizing များအတွက်အခမဲ့ဂီတစီမံခန့်ခွဲမှု Tools များ
တီဗီအဘို့ကို Samsung Apps ကပ - သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
သင်၏ဖုန်းပေါ်မှာယခုပင်လျှင်မယ့်ဒါကသီချင်း Shazam လုပ်နည်း
Arc 9: ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုချက် Exploring
တစ်ဦးအခမဲ့ပန်ဒိုရာရေဒီယိုအကောင့် Set Up လုပ်နည်း
Windows Media Player 12 မှာဂီတဖြည့်ထည့်ပြီးတော့ကိုဖယ်ရှားခြင်း
နို့ Music ကိုမကြာခဏမေးခွန်းများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအွန်လိုင်း Watch လုပ်နည်း
Chrome ကို Extensions ထည့်သွင်းနည်း
'' W / E ကိုဆိုတာဘာလဲ W / E ကိုအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
လက်ဆောင်ပေးမယ်အဖြစ် iTunes ကိုခရက်ဒစ်ပေးပါလုပ်နည်း
Linux ကိုအသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးက Linux ကို Bootable USB က Drive ကို Create ရန်ကဘယ်လို
Mac အတွက်ရွှေ့ပြောင်းလက်ထောက်က Windows PC ကိုဒေတာများရွှေ့နိုင်သလား
တစ်ဦးက XML Feed ဖန်တီးနည်း
ဘင် 10 Galactic ပြိုင်ပွဲ - Wii ဂိမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Nyko PS Vita ပါဝါဆုပ်ကိုင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
PowerPoint 2010 မှာအဖြူအမည်းနဲ့အရောင်ရုပ်ပုံ Effect
တစ်ဦး AVC ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Screen ရဲ့ Refresh Rate vs ဗီဒီယိုကို Frame ကနှုန်း
DVD ကိုအရွယ်အစား: အ formats အမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအများကြီးဒေတာများကိုင်ထားသလား?
သင်ကအဖြူရောင်မှင်အတွက် Print နိုင်သလား?
သင့်ရဲ့ကားပင်အလင်းများလုပ်ငန်းခွင်သော်လည်း Start ကြမည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်
Direct, Bipole နှင့် Dipole ပတ်ပတ်လည်အသံ Speakers
နိုင်ငံတော်သီချင်း MRX700 မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Receiver - ဓာတ်ပုံကိုယ်ရေးဖိုင်
သင်မည်သို့တစ်ဒုတိယအကွန်ပျူတာမရှိဘဲစားစရာရှိသောအခါအော်အတွက်ဂီတ Play သလား?
Web Hosting လိုအပ်ချက်များ